လီပူးစွမ်းအင်သိမ်းဆည်း insulator တွင်လည်းပစ္စည်း Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
XPS Extruded ဘုတ်အဖွဲ့
EPS Polystyrene ဘုတ်အဖွဲ့
Lipu insulator တွင်လည်းပစ္စည်း co ။ , LTD မှ။ Linyi မွို့၌တည်ရှိသည်, က "တရုတ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမြို့တော်" အဖြစ်လူသိများသောရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သာလွန်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ High-နည်းပညာစက်မှုပန်းခြံတွင်တည်ရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် XPS extrusion ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အခြားပြင်ပမြို့ရိုးကို insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများကိုမူထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအတွက်စေ့စပ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ပြင်ပနံရံများ, အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာ, အအေးသိမ်းဆည်းခြင်း, အိမ်ခေါင်မိုး, ကြမ်းပြင်, မြေပြင်, မျက်နှာကျက်နှင့်အပူလျှပ်ကာတခြားလယ်ကွင်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်, တည်ဆောက်ခြင်းစံပြအစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ၏မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အရင်းအမြစ်အသုံးချ, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရာ XPS မြှုပ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် (အစား HCFC ၏) မီးလျှံနှောင့်နှေး polystyrene နှင့် CO2 ကို အသုံးပြု. HCFC ထွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဝန်ကြီးဌာနကအတူကတိကဝတ်စာတစ်စောင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအားအောင်မြင်စွာ iso9001 ရယူထားပါတယ်: 2008 နှင့်အောင်လက်မှတ်တည်ငြိမ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသေချာ, GB ကို / t10801.2-2002 စံမှညီ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့လူ့ဒီဇိုင်းကိုအလေးပေးခြင်း, အရည်အသွေးမြင့်နဲ့လူ့ထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့မှာရည်ရွယ်သည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုဖောင်းတင်းကြပ်စွာပေးပို့မတိုင်မီကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
Lipu insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများ co ။ , LTD မှ။ ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းကအရည်အသွေးမြင့်အသုံးပြုပုံကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်အသက်နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှု၏လူတန်းစားပေါင်းစုံကနေမိတ်ဆွေတွေရဲ့ထောက်ခံမှုအနိုင်ရ "ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအာမခံချက်" ၏နိယာမနှင့်အညီ, လောကီသားနှင့်တကွ, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူစျေးကွက် exploit သည်အဆင့်မြှင့်တင်အရှိန်မြှင့်ရန် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသည် compression ခွန်အားထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်ကုန်နည်းပညာအကြောင်းအရာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အပူလျှပ်ကာ, ပိုကြီးတဲ့တိုးနှင့်အတူရေငွေ့ permeability ခုခံ, စွမ်းအင်ချွေတာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုနှစ်သက်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unremitting အားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ချွေတာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစွမ်းအင်ချွေတာရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ထိရောက်သောနှင့်ထိရောက်သောန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဖောက်သည်များကို!
Lipu insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများ co ။ , LTD မှ။ ရိုးသားစွာ, သွားရောက်လည်ပတ်ပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ပူးတွဲပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့ ...
အကွိမျမြားစှာ Applications ကို
half-လမ်းစက်မှုပန်းခြံ, Lanshan ခရိုင်, Linyi ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 17607131775
E-mail ကို: 17607131775@163.com
မူပိုင် Linyi lipu insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများ Co. , Ltd